भदौ ४, काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनादेखि निरन्तर उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा आज फेरि वृद्धि भएको छ ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु. ३०० र चाँदीमा प्रतितोला रु. ५ ले वृद्धि भएको छ । छापावाला सुन प्रतितोला रु. ७१ हजार ३०० पुगेको छ । मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला रु. ७१ हजारमा कारोवार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला रु. ३०० ले वृद्धि भएको छ । स्थानीय बजारमा तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु. ७१ हजार पुगेको छ । मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रतितोला रु. ७० हजार ७०० मा कारोवार भएको थियो ।
सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ । आज चाँदीको मूल्य रु. ५ ले वृद्धि भएर प्रतितोला रु. ८३० पुगेको महासङ्घले जनाएको छ । मङ्गलबार चाँदी प्रतितोला रु. ८२५ मा खरीदबिक्री भएको थियो ।
भदौ लागेसँगै स्थिर भएको सुनको मूल्य आज वृद्धि भएको हो । गत साउनको शुरुआतदेखि नै सुनको मूल्य उकालो लाग्न थालेको थियो । साउन महीनामा सुनको मूल्य प्रतितोला रु. सात हजार र चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु. ९५ ले वृद्धि भएको छ ।
साउन १ गते छापावाला सुन प्रतितोला रु. ६४ हजार ५००, तेजाबी सुन रु. ६४ हजार २०० र चाँदी प्रतितोला रु. ७४५ मा कारोबार भएको थियो । साउनको अन्तिममा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको थियो । साउन ३१ र ३२ गते छापावाला सुन प्रतितोला रु. ७१ हजार ५००, तेजाबी सुन रु. ७१ हजार २०० तथा चाँदी प्रतितोला रु. ८४० मा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔँ एक हजार ५०० अमेरिकी डलर पुगेको छ ।